Dowladda Soomaaliya oo 5 Milyan oo dollar u qoondeysay la tacaalidda caabuqa COVID- 19 – Kalfadhi
Dowladda Soomaaliya oo 5 Milyan oo dollar u qoondeysay la tacaalidda caabuqa COVID- 19
Ra’iisul Wasaaaraha Jamahuuriyadda Federaalka ah Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xalay shaaciyay in dowladda Soomaaliya ay 5 Milyan oo Doollarka Mareykanka ah u qoondeysay la tacaalidda caabuqa COVID- 19, dhammaan dalka oo dhan.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha aya ku dhawaaqay in la xirayo dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha, laga billaabo maalinta Berrri ah, iyada oo ay xirnaan doonaan muddo 15 maalin ah, si looga hortago faafidda caabuqa CONVID-19, wuxuuna muwaadiniinta faray in la joojiyo kulamada waaweyn, iyo isku soo baxyada fagaarayaasha.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ganacsatada Soomaaliyeed kala hadlay saameynta uu dhaqaalaha dalka ku yeelan karo caabuqaan iyo sida looga hortagi lahaa, wuxuuna ugu baaqay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada in loo midoobo, ka hortagga caabuqan, isla markaana la raaco timaamaha hey’adaha dowladda ee ku howlan howshan.
Dowladda ayaa ku howlan dhamaystirka xarumo lagu karantiilo, laguna hubiyo dadka looga shakiyo cudurka, halka Isbitaalka Martiini loo asteeyay in lagu daweeyay bukaannada uu cudurku haleelo.
Guddoomiyaha Xisbiga Himilo Qaran oo sheegay in dadka taladda haya aysan rabin in doorasho sax ah qabtaan
Safiirkii Soomaaliya ee Midowga Yurub oo kamid noqday Xildhibaannada Cusub ee Koonfur-Galbeed